मनोरंजन – Eps Sathi
नयाँ दिल्ली : बेलायतमा एउटा अनौठो किसिमको घटना घटेको छ। डेटमा गएको एकजोडीले १८ हजारको बिल तिर्नुपर्ने भएपछि फरार भएको घटना बाहिरिएको छ। बेलायतको नर्थ योर्कशायरमा भ्यालेन्टाइन डेमा सो जोडी पबमा रोमान्टिक डेटमा गएको थियो। दुवैजनाले खाना खाएको र मदिरा पिएको समेत गरी करिब १८ हजार रुपैयाँको बील आयो। आफैले खाएको खानाको बिल तिर्नुको सट्टा उनीहरु पैसा नदिएर भागे। त्यसपछि रेस्टुरेन्ट मालिकले फेसबुकको मद्दत लिएर जोडिको बिल सार्वजनिक गरिदियो। उनीहरुले रोमान्टिक डेटको लागि टेबल बुक गरेका थिए। तर बिल भने तिरेनन्। पछि पबले बील तोकिएको समयमा बुझाउन पनि निर्देशन दियो । यो जानकारी प्रहरीलाई पनि दिइएको छ।योसँगै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले पब मालिकसँग यस जोडीको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गरेका समेत छन्। ‘द मिल’ नामक पबले यो जोडीको बिल सार्वजनिक गरेको हो ।उनीहरुले थाइ ग्रीन करी, ४ वटा वाइन
नेपाल र भारतको स-म्बन्ध रोटिबेटीको छ भन्ने गरिन्छ केहि नेपालिहरु भारतीय संग बिहे गरेर उतै बसेका छन् केहि भारतीय हरु नेपाल बिहे गरेर आएका छन त्यस्तै आज हामि भारतीय कलाकार हरु जसको नेपाल संग नाता रहेको बारेमा चर्चा गर्ने छौ। केहि भारतीय बलिउड कलाकार हरु जसको नेपाल संग पारस्परिक स’म्बन्ध रहेको छ। ति कलाकार हरु हुन् गोबिन्दा अहुजा,भारती सिंह,श्रृति झा ,अहमद खान आउनुहोस चर्चा गरौ कसरि साइनो रह्यो यी कलाकारहरु संग।नेपालीहरुको बलिउडप्रतिको सम्बन्ध माला सिन्हा बलिउडमा कुनै समयकी चर्चित रहेकी नायिका माला सिन्हा नेपाली हुन । उनको बुबा नेपाली क्रिश्चियन हुन्। माईती घर नामक चलचित्रमा काम गरेर बलिउडमा नै आफनो करियर बनाएकी माला सिन्हाले नेपालकी छोरी बनेर बलिउडमा नाम र दाम दुबै कमाईन् ।बलिउडका चर्चित नायक गोबिन्दाले नेपाली मुलकी चेलीसँग विवाह गरेका छन्। उनी नेपालका ज्वाई हुन् । उनी हरेक कार्यक्रममा
अभिनेत्री रेखा थापाले जाजरकोटका बलराम शाहीसँग अदालती बिहे गरेकी छिन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुईजनाले कोर्ट म्यारिज गरेकाे रेखा थापाले बताएकि छन् ।शाही पेशाले पर्यटन व्यवसायी हुन् । ९ वर्षअघि फिल्म निर्माता छविराज ओझासँग सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि रेखा सिंगल थिइन् । स्रोतका अनुसार शाही र रेखा केही वर्षयता रिलेसनसिपमा थिए । गत माघ ११ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रेखा र बलरामबीच कानूनी बिहे भएको स्रोतले जनाएको छ । तर, रेखाले चाहिँ बिहेको खबरलाई मिडियासामु गुपचुप राख्दै आएकी थिइन् । उनीहरुबीच बैशाखमा बिहे हुने जनाइएको थियो । स्रोतका अनुसार माघ २८ गते काठमाडौंस्थित घरमै दुईजनाले विधिवत बिहे गरेका थिए । सानो पारिवारिक जमघटबीच उनीहरुबीच बिहे भएको जनाइएको छ ।रेखाको बिहेलाई लिएर असन्तुष्ट आमा सरस्वती चाहिँ केही समयदेखि बिराटनगरमा बस्दै आएकी छिन् । बिहे दर्ता भएपछि मात्र रेखाले आमालाई यसबारे जान
प्रशस्त धन सम्पति भएर आफूले चाहेका विश्वका विभिन्न ठाउँ घुम्न जो कोहिलाई पनि रहर हुन्छ। अझ सानै उमेरमा प्रशस्त धन सम्पति होस भन्ने चाहाना त सबैको होला। तर नाइजेरियाका एक ९ बर्षका बालकले यस्तै सौभाग्य पाएका छन। नाइजेरियाका मोहम्मद अवाल मुस्तफा भर्खर नौ वर्षका भए। उनलाई नाइजेरियामा संसारकै कान्छा अर्बपति भनेर चिनिन्छ। सामाजिक सञ्जालका सेलिब्रिटी मुस्तफालाई धेरैले मोम्फा जुनियर भन्छन्। मोम्फा आफ्नै निजी हवाईजहाजमा संसार घुम्छन्। उनीसँग थुप्रै बंगला र सुपरकारहरू पनि छन्। इन्स्टाग्राममा उनका ३९ हजार ४ सय जना फलोअर्स छन् भने उनले त्यसमा जम्मा ६ वटा फोटो हालेका छन्। ती फोटो उनले विभिन्न ब्रान्डका गाडी, महँगा कपडा र हवाईजहाजमा बसेर खिचाएका हुन्। उनी सानो उमेरमै धनी हुनुको कारण उनका बुबा हुन् जसका लागि उनी सधैं आभारी रहने बताउँछन्। सन् २०१९ मा मोम्फा जुनियर ६ वर्षको हुँदा उनलाई उनका बुबा इस्म
काठमाडौं। अचेल बलिउड सेलिब्रेटीहरूको बाल्यकालका तस्विरहरू सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेका छन्। फ्यानहरू पनि आफ्नो मनपर्ने स्टारहरूको बाल्यकाल फोटो हेर्न मन पराउँछन्। यस्तै एउटा तस्विर फेरि एकपटक सामाजिक सञ्जालमा देखा परेको छ, जसलाई मानिसहरुले चिन्न खोजिरहेका छन्। मानिसहरुले अनेकन अड्कल बाजि लगाउँदा समेत धेरै जनाले चिन्न नसकेको यो तस्विर आखिर कसको होला त? कतिपयले तस्बिर हेरेर सुपरस्टारलाई चिन्न थालेका छन् भने कतिपयले उनलाई अगाडि बढाएर पनि चिन्न सकेका छैनन्। वास्तवमा, एक सुपरस्टारको बाल्यकालको तस्विर इन्टरनेटमा आएको छ, जसमा उनी बिना कपडाको स्टाइलमा पोज दिइरहेका छन्। तस्विरमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि एक बच्चाले कपडा बिना धेरै प्यारा स्टाइलमा पोज दिइरहेको छ। यो बच्चाले कम्मरमा हात राखेर पोज दिइरहेको देखेर मानिसहरु उनको सुन्दरताको तारिफ गर्दा थाकेका छैनन् । आखिर आजको मितिमा सुपरस्टा
अभिनेत्री रश्मिकाको नजर दुई सन्तानको बाबुमा परेपछि
साउथ अभिनेत्री रश्मिका मन्दना आफ्नो सुन्दरताका कारण सामाजिक सञ्जालमा सधै हावी हुन्छिन् । उनको मिठो र मिठो शैलीले फ्यानलाई सधैं मोहित बनाउँछ। यही कारणले गर्दा उनको सुन्दर र मनमोहक अभिनयका कारण उनले नेशनल क्रस रश्मिका मन्दना नाम पाएकी हुन् । गीता गोविन्द, भीष्म र पुष्पाः द राइज जस्ता चलचित्रबाट उनले मानिसको मन जितिन्। तर तपाईलाई थाहा छ उनको ड्रीम हिरो को हुन् ? रश्मिका मन्दना ती अभिनेत्री हुन् जसमा करोडौंको मन अडिएको छ तर एक स्टार पनि छन् जसमा रश्मिकाको मन अडिएको छ । अचम्मको कुरा त के छ भने यी स्टार ब्याचलर हिरो नभई दुई सन्तानका पिता हुन् । उनको नाम मास्टर फेम थालापथी विजय हो। वास्तवमा, यो खुलासा अल्लु अर्जुन स्टार पुष्पाको अभिनेत्री रश्मिकाले एक फिल्मको प्रमोशनका क्रममा गरेकी थिइन् । उनले भनिन्– उनलाई एक तमिल स्टारसँग क्रस थियो, जससँग उनी पर्दामा आउन चाहन्छिन् । रश्मिकाले फिल्म भीष्मक
सप्तरीको एक ठाउँ यस्तो छ जहाँ तपाईहरुले फ्रिमा टिकटक भिडियो बनाउन पाउनुहुने छैन। टि'कटक भिडियो बनाए बापत केहि शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। सप्तरी राजविराजका शशन देवकोटाको टिमले गत वर्ष भरतपुर महानगरपालिका ५ समिचोकमा १२ कठ्ठामा पहिलो पटक स्ट्रबेरीको परी'क्षण खेती गरेको थियो। शशनसहित आठ जनाले स्ट्रबेरीको उत्पादनमाथि अ'नुसन्धान गरे। स्ट्रबेरीले राम्रो फल दिएपछि उनीहरूले यस वर्ष करिब १८ कठ्ठामा स्ट्रबेरीको व्यावसायिक खेती गरेका छन्। गत वर्ष उनीहरूले प'रीक्षणका लागि लगाएको स्ट्रबेरी फार्म भा'इर'ल नै बन्यो। यो फार्मलाई सामा'जिक सन्जा'लले नै भा'इर'ल बनाएको भन्दा फरक नपर्ला। फार्मभित्र प्रवेश गरि स्ट्रबेरी टिप्दै टिकटक बनाउनेको भि'ड लागेपछि केही दिनसम्म फार्म नै बन्द गर्नुपरेको थियो। टि'कटक भिडियो बनाउनेको अ'त्याधिक भि'ड लागेपछि सम'स्या उत्पन्न भएर केहि समयका लागि फार्म नै ब'न्द समेत गर्नुपरेको
जेन्सी । संसारमा मानिसहरु अनाैठाे खालका अनेक कामहरु गरेर पैसा कमाउँदछन् । तर के तपाइ विश्वास गर्नु हुन्छ कोही मानिसले त आफ्नो अपान वायु (गन्हाउने पाद) बेचेर पनि पैसा कमाउन सक्दछ भनेर ? यो त हुनै नसक्ने कुरा हो भन्ने लाग्दछ । तर संसारमा चाहे भने नबिक्ने कुरा के पो रहेछ र ? अमेरिकामा एक महिलले आफूले अपान वायु निस्कासन गरेको भिडियोहरु बिक्री गरेर पैसा कमाइरहेकी छिन् । ३१ वर्षकी लुश बोटानिस्ट नामकी ती महिलाले आफूले पादेका भिडियोहरु अनलाइनमा बिक्री गर्दछिन् । अनेक पोज, भावभंगी तथा आवाजमा अपानवायु निस्कासन गरेका भिडियोहरु बेचेरै उनले अहिलेसम्म झण्डै ३० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम कमाइसकेकी छिन्। अपान वायु बिक्री गर्ने लुश इन्टरनेटमा फार्ट क्विन अर्थात् पदुवा रानीको नामले चर्चित छिन् । अहिले पादेरै लखपति बनेकी लुशलाई सुरुमा चाहीँ यस्तो काम गर्न सहज महसुस हुँदैनथ्यो । एक अन्तरवार्ताका क्रममा उनल
यदि तपाईहरु कोरियामा हुनुहुन्छ र कोरियन खानाको स्वाद लिनुभएको छैन भने तपाईले ठूलो कुरा मिस गरिरहनुभएको छ। सबैजसो कोरियन खानाहरु स्वास्थबर्धक छन। स्वास्थका लागि लाभदायक हुनुका साथै कोरियन खानामा धेरै परिकारहरु रहेका छन। परम्परागत कोरियन खानाहरु विश्वभर चर्चित रहेका छन। तपाईहरु पनि कोरियन खाना एकपटक खाइ हेरौं भन्ने चाहानुहुन्छ भने आज हामी एकपटक चाख्नै पर्ने प्रमुख ५ खानाहरुका बारेमा कुरा गर्दछौं। फिबिम्फाब : पहिलो नम्मरमा भिविम्फाब रहेको छ। यो खानेकुरा भेज वा ननभेजका रुपमा अर्डर गर्न सकिन्छ। यो खानेकुरामा भात, तरकारीहरु, मासु, खुर्सानीको सस त्यसमाथी अण्डा राखिएको हुन्छ। यो खानेकुराको सुरुवात कहाँबाट भयो भन्ने कुराको यकिन नभएतापनि यसले कोरियाको इतिहाँसमा ठूलो छाप पारेको छ। यस खानेकुराको बारेमा सबैभन्दा पुरानो रेकर्ड सन १६६० को दशकमा रहेको भेटिएको छ। यो खानेकुरालाई कोरियामा आफ्नो पूर्खा वा